Waraysi Taliyaha Saldhigga Qandala: Daacish iyo Saameynta Deegaanka (dhegayso) – Radio Daljir
Waraysi Taliyaha Saldhigga Qandala: Daacish iyo Saameynta Deegaanka (dhegayso)
Juunyo 27, 2017 10:34 g 0
Gaashaanle Axmed Cali Jire, taliyaha saldhiga booliska degmada Qandala ee gobolka Bari, waa dhibbane kooxda Daacish, waxa ayna dileen wiil uu abti u yahay oo ilaalo ka hayey mid kamid ah beeraha xijiyaha ee uu deegaanku caanka ku yahay. Waxay kale oo burburiyeena hoy iyo gaari uu lahaa, isaga oo ka badbaaday dil ay la beegsadeen.
Gashaanle Axmed Cali waxauu Radio Daljir uga waramay khatarta kooxdan ay ku hayso deegaanka iyo sida looga guulaysan karo.
Waxaa uu sheegay in ay adagtahay in qof ka yimid gobolka Bakool uu dagaal ka gaysto gudaha Puntland, balse ay jirto taageero ay ka helayaan dad deegaanka ka soojeeda.
Taliyaha ayaa sheegay in shacabka la kiciyo oo dowladdu qorshe ka yeelato looga guulaysan karo Daacish Qandala. Waxa uu Taliyuhu sheegay in aysan Qandala oo kaliya kooxda Daacish ku suganayn ee ay tuulooyin badan oo Qandala hoosyimaada ay deegaan ku leeyihiin.
21kii bishaan Juun ayaa Guddoomiyaha Gobolka Bari, Yuusuf Dhedo, waxa uu cafis ku siidaayey tiro maxaabiis ah oo Daacish ayada oo aan wax wada tashi ah lagala yeelan dadka deegaanka, iyo waliba eheladii iyo agoontii ay ka tageen askarta iyo dadka Daacish laayeen.
Maxamud Cabdi Ibrahim ayuu u waramay.
Dhedo iyo AlShabaab: “Cafis baad Tihiin wixii Dadka iyo Dalka aad u Gaysateen Intaas ha Idin kaga Ekaato!”